Face Mask – Healthy Life Journal
နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်/မလုပ်သင့်
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း Q. အပြင်ထွက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်ပြီး လုပ်တာက ကျန်းမာရေးအရ သင့်တော်မှုရှိပါသလား ဆရာ။ A. အခုလောလောဆယ် ထုတ်ထားတဲ့ အမိန့်အရ အပြင်ထွက်ရင် Mask တပ်ရမယ်ဆိုတော့...
လေထုထဲက ဖုန်မှုန့်များ၏ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. လေထုထဲက ဖုန်မှုန့်တွေဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဖုန်မှုန့်တွေက မြေကြီးကနေလာတယ်၊ တစ်ခါတလေ မြေဆီလွှာကနေလာတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ ကျောက်စောင်ကျောက်ခဲတွေကနေ လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖုန်မှုန့်တွေထဲမှာ အင်းဆက်ပိုးမွှားလေးတွေ ပါတတ်သလို ပန်းဝတ်မှုန်လေးတွေလည်း...
လရိပ်မေ မျက်နှာကြည်လင်တောက်ပစေဖို့ ှSpa သွားပြီး အကုန်အကျမခံနိုင်ရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒိန်ချဉ်နဲ့ပေါင်းတင်လိုက်ပါ။ – မျက်နှာကိုသန့်စင်အောင်ဆေးကြောပြီး ဒိန်ချဉ်အလွတ်ကို မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး အနှံ့လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာမှ ရေနဲ့ဆေးချလိုက်ပါ။ ချွေးပေါက်တွေကျဉ်းပြီး မျက်နှာကြည်လင် သန့်စင်သွားပါလိမ့်မယ်။ – မျက်နှာတစ်ခုလုံး လန်းဆန်းသစ်လွင်သွားအောင်...
အသားအရေ ကြည်လင်စေမည့် မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း
လရိပ်မေ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ၁။ သင်္ဘောသီး တစ်လုံးရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံ၊ ၂။ ပျားရည် လက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်း။ ပြုလုပ်သင့်သည့် နည်းလမ်း (၁)သင်္ဘောသီးကို အခွံခွာပြီး အစေ့ထုတ်ကာ အနှစ်ကို ယူပါ။ (၂)ပျားရည်နဲ့ ရောမွှေပါ။ (၃)မျက်နှာအသားအရေပေါ် သုတ်လိမ်းပြီး...